Izindaba - Izinhlobo zama-fiber amplifiers
Lapho ibanga lokudlulisa lide kakhulu (ngaphezu kwamakhilomitha ayi-100), isiginali ebonakalayo izoba nokulahlekelwa okukhulu. Esikhathini esedlule, abantu babevame ukusebenzisa abaphindayo be-optical ukukhulisa isignali ebonakalayo. Lolu hlobo lwemishini lunemikhawulo ethile kuzinhlelo zokusebenza ezisebenzayo. Esikhundleni salo yi-optical fiber amplifier. Isimiso esisebenzayo se-optical fiber amplifier siboniswa esithombeni esingezansi. Ingakhulisa ngqo isignali ebonakalayo ngaphandle kokulandela inqubo yokuguqulwa kwe-optical-electrical-optical.
Isebenza kanjani i-fiber amplifier?
Yiziphi izinhlobo ze-fiber amplifiers ezikhona?
1. Isikhulisi se-fiber se-Erbium-doped (EDFA)
I-Erbium-doped fiber amplifier (EDFA) yakhiwe kakhulu yi-erbium-doped fiber, umthombo wokukhanya wepompo, i-coupler ye-optical, i-isolator ye-optical, nesihlungi se-optical. Phakathi kwazo, i-erbium-doped fiber iyingxenye ebalulekile yokwandiswa kwesiginali ye-optical, esetshenziswa kakhulu ukufeza ukukhuliswa kwesiginali ye-1550 nm Band, ngakho-ke, i-erbium-doped fiber amplifier (EDFA) isebenza kangcono ebangeni lobude be-1530 nm to 1565 nm.
Ukusetshenziswa kwamandla okupompo okuphezulu kakhulu (amakhulu kune-50%)
Ingakhulisa ngqo futhi ngasikhathi sinye isignali ebonakalayo ku-1550 nm band
Thola ngaphezu kwama-50 dB
Umsindo ophansi ekudlulisweni kwebanga elide
I-Erbium-doped fiber amplifier (EDFA) inkulu
Le mishini ayikwazi ukusebenza ngokubambisana neminye imishini ye-semiconductor
I-Raman amplifier ukuphela kwensiza engakhulisa amasiginali we-optical ku-1292 nm ~ 1660 nm band. Umgomo waso wokusebenza ususelwe kumthelela wokusakazeka we-Raman oshukumisayo ku-quartz fiber. Njengoba kukhonjisiwe esithombeni esingezansi, lapho ukukhanya kwepompo kudonswa Lapho isibonakaliso sokukhanya esibuthakathaka kuMann sithola umkhawulokudonsa kanye ne-wave light light wave kudluliswa ngasikhathi sinye ku-fiber optical, isibonakaliso sokukhanya esibuthakathaka sizokwandiswa ngenxa yomphumela wokusabalalisa we-Raman .
Uhla olubanzi lwamabhendi asebenzayo
Ingasetshenziswa kuzinhlelo zokusebenza ezifakiwe zemodi eyodwa
Ingangezela ukusilela kwe-erbium-doped fiber amplifier (EDFA)
Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, i-crosstalk ephansi
High futha amandla
Uhlelo oluyinkimbinkimbi lokulawula ukuzuza
3. I-semiconductor fiber fiber amplifier (SOA)
Ama-semiconductor fiber fiber amplifiers (SOA) asebenzisa izinto ze-semiconductor njengezinzuzo zemidiya, futhi okokufaka kwabo kwesiginali yokukhanya kanye nokukhiphayo kunama-anti-reflection coatings ukuvimbela ukubonakala ekugcineni kobuso be-amplifier nokususa umphumela we-resonator.
Amandla okukhipha okuphansi
Umkhawulokudonsa wenzuzo mncane, kepha ungasetshenziswa kumaqembu amaningi ahlukene
Kushibhile kune-erbium-doped fiber amplifier (EDFA) futhi ingasetshenziswa ngemishini ye-semiconductor
Ukusebenza okungahambisani nolayini kokushintshashintsha kwenzuzo, ukuguquguquka kwesigaba esiphambanweni, ukuguqulwa kwamaza amade nokuxubana kwamagagasi amane kungafezeka
Ukusebenza akuphakeme njenge-erbium-doped fiber amplifier (EDFA)
Umsindo ophezulu nenzuzo ephansi
Intengo ye-Huawei Olt, I-Xfp Transceiver, I-Sfp C ++, Transmitter Wangaphandle Transmitter, IHuawei Qsfp +, Optical Fibre Module,